QABSOO FINIINSUUN…WAREEGAMTOOTATTI. KABAJAA HORUUDHAA !!! -
SEENAA Y.G (2005), kutaa 1ffaa
Imalli Qabsoon Oromoo itti jiru waan Qoosaa miti. Lubbuu lammiilee keenya qaqqaalii itti wareegaa jirra. Kaayyoon nuuti deemnuuf, hegaree Ummata keenyaaf furmaata maayyii mirkaneessuufii. Luubbun Lammiilee keenyaa daldala shukkaaraa ykn Ashaboo miti. Uffata ganama uffatanii galgala baasaniis miti. Haqa Umama keenyaa deeffachuu barbaanna. Kanaaf wareegama lubbuu itti baasaa jirra. wareegama qabeenyaa fi jiruu fi jireenyaa itti gabbaraa jirra. Qabsoon keenya eessa ga’ee xumura akka godhatu eenyunillee hin gaafannu. Kan Qabsootti cichee qabee jiruu miti, dhalooti har’aayyuu hubatee lubbuu isaa dabarsee kennaa jirra. Qabsoon keenya maal akka fakkaatuu fi maal gochuu akka qabnuu,,warra xiinxala siyaasaa qilleensarraa oofaniin ka qajeeluus miti. Akkatti eegalame qaba. Akka itti xumuramus qaba. Dhaloota har’aaf Qabsoon kun galiin isaa eessa akka ta’ee itti himuuf abbaluun fakkeessummaafi. Kanaaf Qabsoon Oromoo daranuu hammaatee fi jabaatee amma diinni haqa Oromoo osoo itti hadhaawuu liqimsutti itti fufa. Bakka irra jirrurraa shakkii hin qabnuu. Diinatu hollataa jiraata malee. Qabsoo manaa baaneef ammallee finiinsuun murteessaadhaa. Furmaati maayyii Oromoof jiru, wayyaanee hiddaan buqqisuudhaa. Wayyaanee sochoofnee, walitti isaan rukutaa jirra. Dingadeen itti of dhiiteessitu gatiittii eenyurratti akka ta’ee hubachifnee jirra. Of tuulummaan isaanii qilleensarratti ta’uu ifatti itti argisifnee jirra. Nama ajjeesuu osoo hin taanee, nama fayyisuutuu Ulfaataa akka ta’ee itti argisifnee jirra. Waan barbaannee gochuu akka dandeenyu ifatti addunyaatti argisfnee, maalummaa keenya mirkaneessinee, Ummata hundee addunyaa ta’uu keenya raggaasifnee jirra. Faallaa kanaa wayyaaneen salphoo ta’uu ishee ifatti dhugeessinee jirra.
1. Harcaatoonni Baabuura Qabsoo Oromoo.
2. Qabsoon Oromoo bukoo keessaa raacatii baaseera,
3. Dhaloota siyaasa qilleensarraan machaa’ee
← Can Ethiopia’s new leader bridge ethnic divides? | Inside Story A tough road ahead for Ethiopia’s new leader Abiy Ahmed →